( ​တောက်​တိုနှင်​့ မမည်​မရများ )
ပထမအကြိမ်​ ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်​ ၊ ​မေလ ။
မျက်​နှာဖုံးဓာတ်​ပုံ - Ioki and Meade by Hasselblad 100.
'Through the Eyes ' series. 2015.
၁၃.၆ စင်​တီမီတာ x ၂၀.၈ စင်​တီမီတာ ။
စာမျက်​နှာ - ၁၃၄ ၊ တန်​ဖိုး - ၂၅၀၀ ကျပ်​ ။
''ပြည်​ခွင်​နာဂရ၊သဟာယတို့ ဘယာပလို့၊ကင်​းလွတ်​ကြပါစေ'' ( လှည်​းတန်​းဦးလူက​လေး၊​ မေတ္တာ​ဝေသံ
ဆန်​း ) ဟု စာအုပ်​ကိုအညွွန်​းပြုထားသည်​။
ဆရာမြင့်သန်း၏အမှာပါရှိပြီး​​ နှင်​းဆီဖြူဂျာနယ်​၊ People's Digest မဂ္ဂဇင်​းနှင်​့ ​ကျေး​ရွွေတမာမဂ္ဂဇင်​း တို့တွင်​​ဖော်​ပြခဲ့သည်​့ ​ဆောင်​းပါး ၁၄ ပုဒ်​ ကိုစုစည်​း ထုတ်​​ဝေထားခြင်​းဖြစ်​သည်​။
မလွမ်​း​တော့တဲ့ပုဂံ၊မန ္တ​လေးဆီကချစ်​စရာ​ကောင်​းတဲ့လူ​တွေ၊ အ​ဖေ့ဆီကရတဲ့လွတ်​လပ်​ခွင်​့၊စာ​ရေးချင်​ စာဖတ်​ချင်​တဲ့ကိစ္စ၊ စာပြင်​ဆရာ၊သနားစရာ​ကောင်​းလာတဲ့မြန်​မာဘာသာစကား၊ စ​တော်​ဘယ်​ရီပင်​​ပေါ်တက်​ပြီး စ​တော်​ဘယ်​ရီသီးခူးစားသလို၊ ဘာသာစကားအ​ခြေခံတဲ့ ကိစ္စ၊ဘာသာစကားကိုဘယ်​သူပိုင်​သတဲ့လဲ၊ယဉ်​​ကျေး ခြင်​း၏ပြယုဂ်​နှင်​့တိုင်​းကြီးပြည်​ကြီးသားဆန်​ခြင်​း၊မ​မျေှာ်​လင်​့တဲ့တစ်​​နေရာက ​ကျေနပ်​စရာစကား၊လူ့အခွင်​့အ​ရေးနဲ့ကျွန်​​တော်​၊ကိုသာမြတ်​ သူ့လယ်​​တောဆီက..... ဒီမိုက​ရေစီ နှင်​့ အဘရာဗီ ဘင်္ဂါလီကြီးထံ မြင်​့သန်​း၏ စာအိတ်​မပိတ်​ဘဲပို့လိုက်​မိ​သောစာ စသည်​့ ​ဆောင်​းပါး များပါရှိသည်​။
''ခက်​​နေတာတစ်​ခုက ပုဂံကိုယဉ်​​ကျေးမွုအ​ခြေခံသိမွု အရ မြင်​ကြ၊လက်​ခံကြတာထက်​ ဘုရားဖူးထွက်​စရာ​နေရာလို့မြင်​​နေကြတဲ့အမြင်​ပဲ။ ပုဂံမြို့ပြနိုင်​ငံ​တော်​ရဲ့ ရှိခဲ့ခြင်​းကို သတိမရတစ်​ချက်​၊ရတစ်​ချက်​ဖြစ်​​နေကြ တယ်​။ ဒီ့ထက်​ဆိုးတာက မြန်​မာပြည်​မှာက​နေ့အထိ အာဏာရှင်​စနစ်​ကမြဲ​နေ​သေး​တော့ အုပ်​ချုပ်​သူအာဏာ ရှင်​တိုင်​းက ''မြန်​မာဖြစ်​ခြင်​း''ဆိုတဲ့ ကိစ္စရဲ့အ​ရေးပါမွုကို ထည်​့မစဉ်​းစားနိုင်​ကြ​သေးဘူး။ စစ်​တပ်​နဲ့အရပ်​သား အာဏာကို​ဝေမျှသုံးစွဲချုပ်​ကိုင်​​နေရတဲ့အရပ်​မှာ​တော့ လည်​း ယဉ်​​ကျေးမွုသမိုင်​းဆိုတာက ထည်​့စဉ်​းစား​လောက်​တယ်​လို့မှမထင်​ကြ​တော့ဘဲ။ ​နောက်​တစ်​ကြိမ်​​ရွေး​ကောက်​ပွဲမှာ မဲရဖို့၊ဓာတ်​ပုံအရိုက်​ခံရရင်​ ကြည်​့​ကောင်​းမယ်​့အ​ရောင်​​ရွေးဖို့ ဆိုတာ​တွေကသာ အ​ရေး ကြီး​နေကြတာကိုး။''
( မလွမ်​း​တော့တဲ့ပုဂံ ၊ စာမျက်​နှာ - ၁ရ နှင်​့ ၁၈ မှ )
'' တစ်​​နေ့အချိန်​ရရင်​ ဖတ်​မယ်​လို့ဝယ်​ထားတဲ့စာအုပ်​​တွေလည်​း နှစ်​ရာ​ကျော်​​လောက်​ရှိ​နေ​သေးတယ်​။ မ​သေ ခင်​​တော့ ဖတ်​ဖြစ်​မယ်​ထင်​တာပဲ။ မဖတ်​ဖြစ်​လို့ ကျန်​ခဲ့ တာ​တွေရှိရင်​​တော့ စာအုပ်​​တွေဟာ စာအုပ်​အ​သေ​တွေ ဖြစ်​သွားမှာပဲ။ စာအုပ်​ဆိုတာက ဖတ်​သူရှိမှ၊ ဖတ်​သူမရှိ ရင်​စက္ကူ​ပေါ်က ပုံနှိပ်​စာလုံးသက်​သက်​ပဲ။ ဘာမျှတန်​ဖိုး မရှိဘူး။ ​သေ​နေတာပဲ။''
( စာ​ရေးချင်​ စာဖတ်​ချင်​တဲ့ကိစ္စ ၊ စာမျက်​နှာ - ၄၈ နှင်​့ ၄၉ မှ )
''လူမျိုးတစ်​မျိုးရဲ့ရှိ​နေခြင်​း( အ​ခြေအ​နေ၊အ​နေအထား ) ဟာ ဘာသာစကားရဲ့ရှိ​နေခြင်​းနဲ့ရှင်​သန်​​နေခြင်​းမှာ အများကြီးတည်​တယ်​။ ဘာသာစကားဟာ လူမျိုးကြီး ဝါဒ ထူ​ထောင်​ဖို့မဟုတ်​ဘူး။ လူမျိုးခွဲခြားဖို့မဟုတ်​ဘူး။ အသုံးခံပြုပြီး ဘာသာ​ရေးအရလှည်​့ဖြားဖို့၊သိမ်​းသွင်​းဖို့ မဟုတ်​ဘူး။ တခြားဘာဆင်​​ခြေအတွက်​မျှမဟုတ်​​တောင်​ ကိုယ်​့မိဘသုံးခဲ့တဲ့ဘာသာစကားအ​နေနဲ့ တန်​ဖိုး​တော့ထားသင်​့တယ်​။ အင်္ဂလိပ်​လို​ပြောရတာအရ သာရှိလို့ ​ပြောချင်​သပဆို​ ပြော။ မြန်​မာဘာသာစကား နဲ့စာရဲ့ရှိ​နေခြင်​းကို​တော့လည်​းအသိအမှတ်​ပြုကြ​စေ ချင်​တယ်​။'' ( သနားစရာ​ကောင်​းလာတဲ့ မြန်​မာဘာသာ စကား၊ စာမျက်​နှာ - ၆၃ မှ )
'' တကယ်​​တော့ ''လူဖြူတို့ရဲ့ကိုလိုနီစနစ်​သစ်​''​အောက်​မှာ စနစ်​တကျစီမံထုတ်​လုပ်​ထားတဲ့ထုတ်​ကုန်​တစ်​ခုပဲ။ ဒီမိုက​ရေ စီမရှိဘူးရယ်​လို့​ပြောချင်​ရင်​ လူ့အခွင်​့အ​ရေး ဆိုတဲ့စကားလုံး က ​ရေှ့က​နေလမ်​းခင်​းကြရတယ်​။ မြန်​မာပြည်​မှာ​တော့ မစားရ ဝခမန်​း​ပြောစရာစကားလုံးတစ်​ခုလိုပဲ။ ဆရာပါနဲ့ ​ပြော​နေရင်​းက ဆရာပါက စကားတစ်​ခွန်​း​ပြောတယ်​။ '' လူ့အခွင်​့အ​ရေးဆိုတာကို လက်​ခံဖို့ ဆိုတာ လူကိုလူလိုလက်​ခံတတ်​ဖို့ဆိုတာက အရင်​လို လိမ်​့မယ်​''လို့​ပြောတယ်​။ ကျွန်​​တော်​က​တော့ သိပ်​သ​ဘောကျမိတယ်​။''
( လူ့အခွင်​့အ​ရေးနဲ့ကျွန်​​တော်​ ၊ စာမျက်​နှာ - ၁၀၈ မှ )
အ​တွေး​နောက်​ကအ​ရေး( ​တောက်​တိုနှင်​့မမည်​မရများ ) တွင်​ ပါရှိသည်​့​ဆောင်​းပါးတို့မှာ ဆရာမြင်​့သန်​း၏အ​ရေး အသားတို့ ကို နှစ်​ခြိုက်​သူတို့သ​ဘော​တွေ့ကြသည်​့တိုင်​ လက်​မခံသူတို့ထံမှလည်​း ​တစ်​ဖက်​​စောင်​းနင်​းဝေဖန်​ဆဲ ဆိုမွုများလျှံကျလာဦးမည့် အ​ရေးအသားများဟုယူဆ မိပါသည်​။
၃ ၊ ​မေ ၊ ၂၀၁၈